E JIDERE ONYE ISI FRANCE OCHE, SARKOZY MAKA EGO GADDAFI
Home casino games baccarat online casino
A na – ejide onyeisi France Nicolas Sarkozy na ndị uweojii na Tuesday maka ịjụ ajụjụ site n’aka ndị ọkàiwu na-achọ ebubo maka ego Libyan maka mkpọsa ntuli aka ya na 2007, otu onye ọrụ gọọmenti France kwuru.
Enweghị ike ịchọta ọkàiwu maka Sarkozy ozugbo maka ikwu okwu.
France weputara ikpe ikpe n’afo 2013 wee boo ebubo na mmeri nke ndi isi ochichi 2007 nke Sarkozy nwetara site na ego ndi ozo site n’aka onye isi Libyan onye ndu Muammar Gaddafi.
Onye uweojii gara aga na Sarkozy, Brice Hortefeux, na-ajụkwa ndị uweojii na ụtụtụ Tuesday na nyocha nke Libya, ebe ọzọ dị nso na nyocha ahụ.
Sarkozy, onye na-eje ozi dịka onyeisi oche site na 2007 ruo n’afọ 2012, na-agọnahụ mgbe niile na ọ na-enweta ego ọ bụla na-akpata mgbasa ozi na-akwadoghị, ma kpochapụla ebubo ndị Libya dị ka “grotesque”.
CARDINAL KEITH O’BRIEN ANWUOLA MGBE O DI AFO 80
Na January, onye ọchụnta ego nke France, Alexandre Djouhri, nke ndị na-enyocha ego ego Gaddafi chere na ha ga-akwụ ụgwọ agha Sarkozy jidere na Britain ma gbaa ya ụgwọ mgbe ọ pụtara n’ụlọ ikpe London.
Na akụkọ nke The Guardian nke London, French ọzọ-onye na-azụ ahịa na Lebanọn na 2016 na-azọrọ n’ihu ọha na onye isi Libyan onye ndú Muammar Gaddafi nyere € 50m (£ 43m) iji kwado nchịkwa Nicolas Sarkozy nke 2007 maka ndị isi oche French.
O kwadoro nkwupụta nke nwa Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, n’afọ 2011 na Mr Sarkozy anabatala ọtụtụ nde euro site na ya na nna ya iji kwado ihe ịga nke ntuli aka ya 2007.
N’ihe ngosi a na-ebipụta na mgbasa ozi mgbasa ozi a na-eme nchọpụta, Ziad Takieddine, onye tinyere Sarkozy ka Gaddafi, na-ekwusi ike na o nyefere ego nke ego na onye isi nke France na onyeisi ndị ọrụ ya, Claude Guéant.
N’ịbụ onye na-emegharị ahụ, Takieddine na-ekwu na vidio ahụ, sị: “Ọ bụ ihe dị ka nke ahụ. O meghere dika nke a. Ego ahụ dịkwa n’ime. “
EWEPU LA ANTO NA ULO BBNAIJA
Ọ gwara Mediapart, sị: “Achọtala m ihe ndị na-ekwesịghịzi izobe. Achọrọ m ịkatọ ọnọdụ nke mafia nke anyị bi ugbu a. “
Ihe ebubo ahụ malitere na afọ ise gara aga, ma azịza nke Takieddine nwere ike ibibi n’ihi na ha na-abịa ụbọchị tupu Sarkozy na-achọ nhoputa ntuli aka nke ndị isi obodo Les Républicains. Oge nke mbụ nke primaries, nke Sarkozy na-agagharị Alain Juppe, onyeisi obodo Bordeaux, ga-enwe na Sunday.
E nyewo Sarkozy iwu ka o kpee ikpe n’isiokwu dị iche iche gbasara ego nke mkpọsa ntuli aka ya na-emezughị n’afọ 2012, mgbe Francois Hollande meriri ya.